Nipoitra indray ilay Shinoa zatra manoratra rehefa nohazonina manokana noho ny nitaterany ny resaka COVID · Global Voices teny Malagasy
Nipoitra i Chen Qiushi rehefa tsy hita nandritra ny 600 andro
Voadika ny 08 Oktobra 2021 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Español, Français, English
Chen Qiushi sy Xu Xiaodong. Pikantsary avy amin'ny fantsona Youtube an'i Xu. Chen Qiushi and Xu Xiaodong. Screen capture from Xu's Youtube channel.
Rehefa notazonina manokana nandritra ny 600 andro mahery, nipoitra indray tao amin'ny Twitter sy Youtube tamin'ny 30 septambra i Chen Qiushi , mpisolovava sady mpanao gazety tsy miankina iray izay nanjavona tany Wuhan rehefa nitatitra momba ny valanaretina COVID-19.
Nandeha tany Wuhan i Chen tamin'ny 24 Janoary 2020, taloha indrindra ny nidiran'ny tanàna tanaty fihiboana. Nandefa tatitra voalohany avy any amin'ny hopitaly tao amin'ny Twitter izy, saingy nanjavona tao amin'ny media sosialy tamin'ny 5 Febroary 2020. Niditra tao amin'ny Twitter-ny avy eo ny reniny ny ampitson'io, ary nilaza tamin'ireo mpanaraka azy fa tsy hita i Chen.
Araka ny tatitra iray avy amin'ny CNN, olom-pirenena mpanoratra isan'andro 47 farafahakeliny no nosamborina sy notanana noho ny fanaovana tatitra momba ny valan'aretina COVID tany Wuhan. Ahitana an'i Zhang Zhan ity vondrona ity, izay voaheloka higadra efa-taona an-tranomaizina noho ny fiampangana azy ho “mpitarika ady sy niteraka korontana”. Tsy hita izy nanomboka ny 14 Mey 2020. Araka ny voalazan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Amnesty International, nampijaliana tany am-ponja i Zhang.
Raha nanindry fiampangana an'i Zhang Zhan ny governemanta Shinoa, tsy nataon'izy ireo izany kosa ny raharaha Chen Qiushi. Notazomina nandritra ny herintaona mahery i Chen, ary avy eo navotsotra saingy notazomina tamin'ny trano ambenana tany Qingdao tamin'ny Marsa 2021, raha ny filazan'i Xu Xiaodong, mpilalao haiady mifangaro (MMA) malaza ary naman'i Chen izay nanao fanentanana ho famotsorana azy tao amin'ny media sosialy nandritra izay 20 volana lasa izay.
Avy eo, tampoka teo, tamin'ny 30 septambra, nandefa taratasy tao amin'ny Twitter i Chen, nilaza hoe:
Nandalo zavatra be dia be aho tao anatin'izay herintaona sy valo volana lasa izay. Afaka mizara ny sasany amin'izany aho, fa tsy izy rehetra. Mino aho fa azonao ny zava-mitranga. Nandritra ny fotoana maizina indrindra tamin'ny fiainako, dia ny fanatanjahan-tena MMA no namonjy ahy. Tsy vitan'ny hoe nanampy ny vatako ho sitrana fotsiny ilay Breziliana mpanao ady totohondry Jiu-Jitsu fa nanampy ahy niala tamin'ny fahaketrahana koa.
Tao amin'ny taratasy an-jotra, nilaza izy fa hikarakara hetsika ady totohondry hanaovana asa soa amin'ny 31 Desambra 2021.
Roa ora taty aoriana, niseho vetivety izy tamina horonantsary mivantana tao amin'ny fantsona Youtube-n'ny namany Xu Xiaodong, mitanisa izay nolazainy tao amin'ilay taratasy. Rehefa nampiroborobo ny lalao ady totohondry hanasoavana an'i Chen, dia nilaza i Xu hoe: “Indraindray, rehefa tsy afaka miteny amin'ny vavany ny olona, ​​dia afaka miteny amin'ny totohondriny.”
Mbola voarara tsy hanavao ny haino aman-jery sosialiny ao amin'ny tanibe Shina i Chen Qiushi. Satria nitranga iray andro talohan'ny fetim-pirenena Shinoa ny fisehoany indray tao amin'ny Twitter sy Youtube, mihevitra ny sasany fa ampahany amin'ny fampielezan-kevitra sy diplaomasia takalon'aina ao Beijing izany. Na izany aza, naneho fifaliana lehibe ny ankamaroan'ny mpiserasera nahita azy niverina. Iray amin'ireo fanehoan-kevitra toy izany tao amin'ny randrana fanehoan-kevitra Youtube nilaza hoe:
Vao avy namaky soratr'olona nilaza aho fa tsy afaka nanampy nandatsaka ranomaso [nijery ilay horonan-tsary] izy, tsy azoko izany. Saingy rehefa nijery ilay ampahany aho rehefa nilaza ny mpisolovava Chen fa somary ketraka izy, dia nitomany ny masoko. Tsy maintsy nijaly ny mpisolovava Chen. Matanjaha ary tohizo hatrany. Manohana anareo roa tonta hatrany aho.
Tao amin'ny Twitter, nandrisika ny hafa ilay bilaogera Juan Li mba hitsahatra amin'ny fitsikerana an'i Chen noho izy voalaza fa manompo ho amin'ny tombotsoan'ny fampielezan-kevitr'i Beijing:
Matoky momba an'i Chen Qiushi aho. Herimpo ny manao vy very ny ainao ary manao tatitra momba ny valan'aretina COVID any Wuhan. Sahy ihany koa i Fang Bin [mpitati-baovao vaovao olontsotra iray hafa nitatitra ny valanaretina]. Notazomin'ny CCP nandritra ny fotoana lavalava i Qiushi ary feheziny izy ankehitriny, tahaka an'i Fang Bin, ka nahatonga azy hanjavona. Tsy tokony nanantena isika fa hovonoina na hampijaliana i Qiushi. Miezaka mampizarazara sy mampitahotra antsika ny CCP, koa aza manafika an'i Qiushi. Manan-jo hanao safidy samirery izy ary hikatsaka fahasambarana. Ny atahoran'ny CCP indrindra dia ny mety hisian'ny olona toa an'i Qiushi.
Tsy hita nanomboka tamin'ny 9 Febroary 2020 koa i Fang Bin, olom-pirenena zatra manoratra, nitatitra ihany koa ny fihanaky ny COVID any Shina.
Mpanao gazety menavazana Wang Zhian nandika ny fisehoan'i Chen indray ho hafatra ampahibemaso hanehoana fa tsy resy i Chen:
Nijery ny lahatsarin'i Chen Qiushi sy Xu Xiaodong aho. Tena sarotra ho an'ireo tanora nandeha tany Wuhan ireo ny fanaovana tatitra momba ny valan'aretina COVID-19. Tsy misy toerana ho an'ny olom-pirenena zatra manoratra ny tontolon'ny haino vaky jery any Shina, saingy niezaka izy ireo, ka tena mendri-kaja ny hetsika toy izany. Nijery azy tamin'ny ady totohondry aho. Tsy mbola voadaroka lavo izy. Na dia mankaleo aza ny fiainana, dia mbola hitantsika fa mamiratra ny fanahy. Raha misy ny vintana, dia te-hanatrika mivantana ny hetsika fanatanjahantena aho hahita azy miteny amin'ny totohondriny.